FIATREHANA NY FIFIDIANANA : « Tsy tokony izay lalàmpanorenana ahazoan’ olom-bitsy tombotsoa ihany no hovaina »
Mbola miteraka resabe eto amin’ny firenena ny ho fanovàna na tsia ny lalàmpanorenana sy ny hisian’ny fitsapankevi-bahoaka mialoha ny fifidianana filoha. 6 octobre 2017
Maro tamin’ireo antoko politika sy fikambanana, ary ny fiarahamonim-pirenena no naneho hevitra izay samy mitsipaka marindrano ny hikitihana ny lalàmpanorenana avokoa. Raha ho an’ny antoko Mpanohitra mitondra tsikera manokana dia raha tsy maintsy hisy ihany ny fanovàna sy ny fikitihana ny lalàmpanorenana izay kasain’ny mpitondra fanjakana hatao dia tokony ireo andinin-dalàna rehetra voasoratra ao anatin’io lalàmpanorenana io mihitsy no havaozina daholo.
Araka ny fanazavana noentin’ny filohan’ity antoko ity, Samihary Floriot dia « tsy tokony ampahany amin’ny lalàmpanorenana ihany no asiam-panovàna mba ho tombontsoan’olom-bitsy sy ho tombontsoan’ny mpitondra fa tokony ny lalàmpanorenana iray manontolo mihitsy no hovaina tanteraka ». Nambarany fa tokony hasiam-pikitihana amin’izany, ohatra, ny fanovàna ny rafitra eto Madagasikara ho rafitra federaly, ary ihany koa ny fametrahana ny faritany mizaka tena.
Amin’ny ankapobeny anefa dia hita fa ireo andinin-dalàna izay heverin’ny fitondram-panjakana fa hitondra tombontsoa manokana ahafahany mifikitra eo amin’ny toerany no mahamaika azy ireo.